ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁-၈-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁-၈-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဖို့ ဆန္ဒရှိရင် တလအတွင်း ပြီးစီးနိုင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုကို ၁၉၈၈ မှာ ကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- ပန်းတနော်မှာ ရွာသား ၂၇ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ click
- ရခိုင် ၅ ဦးကို ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ် click
- မြောက်ဦးပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူ ၅ ဦး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်စီ ချမှတ်ခံရ click
- အပစ်ရပ် မွန်ပြည်သစ်နဲ့ မြန်မာစစ်တပ် အခြေအနေ တင်းမာ click
- ပလောင်အဖွဲ့နဲ့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး စတင်ဆွေးနွေး click
- ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ အစိုးရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး click
- ချင်းမိုင်မြို့က တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်း ဦးအေးသာအောင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် click
- မီဒီယာဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်တင်သွင်းဖို့ ထောက်ခံလက်မှတ်တွေ ကောက်ယူ click
- သူရဦးရွှေမန်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက တာဝန်ယူ click
- သူရဦးရွှေမန်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက တာဝန် လွှဲပြောင်းရယူ click
- လွှတ်တော်နာယကတာဝန် အလွှဲအပြောင်း (ရုပ်သံ) click
- ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ငြိမ်းချမ်းရေးမူ click
- ဗြိတိန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သွားရောက် click
- ပြင်သစ်နဲ့ မြန်မာအကြား ကြွေးလျှော် လက်မှတ်ထိုး click
- မြန်မာ့ကြွေး ဒေါ်လာသန်း ၅၅၀ လျှော်ဖို့ ပြင်သစ် သဘောတူ click
- ပြင်သစ်-မြန်မာ ကြွေးမြီပေးချေရေး သဘောတူ (ရုပ်သံ) click
- ကြာသပတေးနေ့ မြန်မာသတင်းများ (ရုပ်သံ) click
- ကိုကိုးကျွန်း ပြည်သူ့သူရဲကောင်းနေ့ (ရုပ်သံ) click
- သမိုင်းနဲ့အတူ ရုန်းကန်ရှင်သန် လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် (သုံးသပ်ချက်) click
- အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက် ပုခုံးထမ်းရုန်းကြဖို့ဆိုတဲ့ ကိုမင်းဇေယျနဲ့ စကားလက်ဆုံ (၃) click
- ရတနာပုံ နေပြည်တော် သတင်းစာ (ဆောင်းပါး) click
- ဂန်ဖလားဖြင့် ထမင်းစားသူများ click
- မွန်ပြည်နယ် ဘီလင်းမြို့ ရေကြီး (ရုပ်သံ) click
- မြဝတီနဲ့ မဲဆောက်မြို့တွေ ရေကြီး (ရုပ်သံ) click
- မြ၀တီမှာ နှစ် ၅၀ အတွင်း အမြင့်ဆုံး စိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက် click
- မြဝတီမြို့မှာ ရေဘေးသင့်ဒုက္ခသည် နှစ်သောင်းခွဲကျော် အကူအညီတွေ လိုအပ် click
- ရေလွှမ်းမိုးမှု နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ထိခိုက် click
- ဧရာဝတီ၏ ထာဝရရေစီးသံများ - ဓာတ်ပုံအက်ဆေး (၂) click
- မြန်မာ့ကျန်းမာရေး အလားအလာကောင်း click
- ပခုံးအဆစ်ကပ် ရောဂါ click
- ဒ ဂု န် တာရာေ နွ ဦး( ၉ ) click
- ရန်ကုန် ငြိမ်းချမ်းရေး (ကဗျာ) click
- အီဂျစ် ထိုင်သပိတ်တွေ ဖြိုဖို့ အမိန့်ထုတ် click
- အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၂ ဦး အီဂျစ်သွားဖို့ အိုဘားမား ညွန်ကြား click
- အီဂျစ်တော်လှန်ရေးရဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ (ရုပ်သံ) click
- အာဖဂန် စစ်ဒဏ်သင့်သူများအတွက် ဆေးရုံ (ရုပ်သံ) click
- ဖုန်းထောက်လှမ်းရေးမှတ်တမ်း ကန် ထုတ်ပြန် click
- ဇင်ဘာဘွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စတင် မဲပေး click
- အငြင်းပွားနယ်မြေမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ တရုတ် လိုလား click
- ရှန်ဟိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀ အတွင်း အပူဆုံးဖြစ်နေ click
- ရှန်ဟိုင်း အပူလှိုင်း ၁၀ ဦး သေ click
- အင်ဒိုနီးရှားမှာ ရိုဟင်ဂျာ ၁၄ ယောက်ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေး click
- တာတမံတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပိုပူနိုင် click
- လေထဲက ဘားတန်းလျှောက်ပြီး ကမ္ဘာ့စံချိ်န်တင် (ရုပ်သံ) click
ခောတ်ကပြောင်းနေပြီသာ ပြောနေတာ ပြည်သူတွေ
အဆင်မပြေကြပါ ။ ရန်ကုန်မှာ
ဘတ်စ် ကားလိုအခြေခံလူတန်းစား တွေအတွက် မရှိမဖြစ်
များကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ကားဈေးတွေချလို. ကားတစီး သိန်း၂၀ ဖြစ်လည်း
စိတ်ကူးမယဉ်နိုင် တဲ. ပြည်သူအများစုအတွက် အုပ်ချုပ်သူတွေ အရင်မလုပ်ပေးသင်.ဘူးလား ?
အခုဆို ၈၈ တွေ၊ NLD တွေ ဘတ်စ်ကားစီးကြတာမတွေ.
တော.ဘူး ၊ (၀မ်းသာမိတယ်၊ တကယ်ပါ)
.. ..... အောက်ခြေပြည်သူတွေလည်း အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးကြပါအုံး။
၂၀၀ ကျပ်ကား မစီးနိုင်လို. ၅၀ကျပ်ကား စောင်.နေတဲ.
ပြည်သူတွေ မှတ်တိုင်တွေမှာ အများကြီး ဖြစ်နေတယ် ။